Flood Light Tower၊ Led Stack Lights၊ Tend Tower Light - ပိုတောက်ပသည်။
အစွမ်းကုန် အားထုတ်ခြင်းသည် အနားယူခြင်း မရှိပါ။
Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd.သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်များနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များဖြင့် မိုဘိုင်းလ်အလင်းမျှော်စင်များ၏ လူသိများသည့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ကုမ္ပဏီသည် သမာဓိ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်မှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ထူးချွန်မှုတို့ကို လိုက်နာကျင့်သုံးကာ အရည်အသွေးမြင့် မီးအလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးရန် ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ လက်ရှိတွင်၊ မိုဘိုင်းမီးပြတိုက်စီးရီး၊ အရေးပေါ်မိုဘိုင်းပါဝါထောက်ပံ့ရေးစီးရီး၊ ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော အရေးပေါ်ပါဝါပန့်နှင့် အခြားထုတ်ကုန်များကို ပါဝါကုမ္ပဏီများ၊ လေဆိပ်များနှင့် စစ်ဘက်ဌာနများက တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြပြီး ထုတ်ကုန်အချို့ကို သြစတြေးလျနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့ ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ .
အထွက်နှုန်းမြင့်သော အလင်းတန်းများ ၊ Telescoping tower သည် 360 ဒီဂရီနီးပါး လှည့်သည်။
ဟိုက်ဒရောလစ်ခေါက်တိုင်ပါရှိသော ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးအလင်းမျှော်စင်။KLT-10000 သည် စျေးကွက်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ တော်လှန်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရောင်းအားအကောင်းဆုံး မိုဘိုင်းအလင်းမျှော်စင် မော်ဒယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
နေစွမ်းအင်နှင့် လေစွမ်းအင် KLT-Hybrid တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော သယ်ဆောင်ရနိုင်သော အလင်းရောင်မျှော်စင်များ
Eco-friedly သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင် ခရီးဆောင်အလင်းရောင်မျှော်စင်
Kubota အင်ဂျင်နှင့် 8kW မီးစက်ပါရှိသော 4X 1000 W metal halide မီးများ။ကိရိယာများကိုလည်ပတ်ရန် အပိုပါဝါများစွာပါရှိသော 20kW အထိ ဂျင်နရေတာအတွက် ရွေးချယ်မှု။
ကြိမ်နှုန်းမြင့် အလင်းမျှော်စင် KLT-6500
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး အသံတိတ်သတ္တု halide အလင်းမျှော်စင်
ဟိုက်ဒရောလစ် ဒေါင်လိုက် Lifetd အလင်းရောင်မျှော်စင် KLT-10000V LED
4X350W LED အလင်းတန်းများ ၏ အလင်းရောင်စွမ်းအားသည် ဖန်တီးထားသမျှ အသေးငယ်ဆုံးနှင့် ဂေဟစနစ်သဟဇာတဖြစ်ဆုံး အလင်းမျှော်စင်သို့ ပြောင်းလဲပေးမည့် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသော မျက်နှာပြင်ပုံစံနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
▶ မြင့်မားသောရွေ့လျားမှုနှင့် သွက်လက်သွက်လက်မှု LB6180E စီးရီးသည် ပြုပြင်ထားသော ပစ်ကပ်ထရပ်ကား အများအပြားကို အသုံးပြုရန်အတွက် ပါဝါကုမ္ပဏီများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ စံပြုပြင်ထားသော ပစ်ကပ်ထရပ်ကားကွန်တိန်နာကို ယာဉ်အဖြစ် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပစ်ကပ်ထရပ်ကားသည် အလွန်လျင်မြန်သော ပြုပြင်သည့်နေရာသို့ မောင်းနှင်နိုင်သည်။ .တင်ဆောင်ရန် ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ လိုအပ်သည့် ရိုးရာမီးပြတိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက...
Brighter Electromechanical မှ KLT-8000 စီးရီးအလင်းရောင်မျှော်စင်သည် စွယ်စုံရ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းသော၊ တာရှည်ခံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလင်းရောင်ကိုပေးစွမ်းပါသည်။ KLT-8000 စီးရီးအလင်းမျှော်စင်သည် အလင်းအားပေးစွမ်းပြီး အလုပ်နေရာပါဝါအတွက် 8kw အထိကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောခြေရာကိုလိုအပ်ပါသည်။ အလင်းမျှော်စင်သည် အကြမ်းခံပါသည်။ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး သံမဏိကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးတွင် ဒဏ်ခံနိုင်၍ ၎င်း၏အဖုံးကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး အသံတိတ်သတ္တုဟိုက်ဒလစ်မီးမျှော်စင် LIGHT BOY KLT-6500 400W Metal Halide မီးအိမ် x4အဆင့်3အဆင့် Mast <4.2m (13ft) အမြင့်> ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် 1. သယ်ယူရလွယ်ကူသော － ယူနစ်အများအပြားကို ထရပ်ကားတစ်ခုတည်းပေါ်တွင် သယ်ယူနိုင်ပါသည်။2. ကိုင်တွယ်ရ လွယ်ကူသည် - လူတစ်ဦးသည် ဆိုက်ရှိ ယူနစ်များကို လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။3. သိုလှောင်ရန်နေရာ လိုအပ်ပါသည်။...
ဟိုက်ဒရောလစ်ခေါက်တိုင်ပါရှိသော ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးအလင်းမျှော်စင်။KLT-10000 သည် စျေးကွက်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ တော်လှန်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရောင်းအားအကောင်းဆုံး မိုဘိုင်းအလင်းမျှော်စင် မော်ဒယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။4x1500W အားကောင်းသော သတ္တု halide မီးချောင်းများနှင့် 9.8 မီတာ ရွက်တိုင်များကြောင့် KLT-10000 သည် အလွန်ကြီးမားသော လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာများကို အလင်းပေးနိုင်ပါသည်။ရောင်းအားအကောင်းဆုံး KLT-1000 သည်...
KLT-1000OLED Light Tower သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းများအတွက် အထူးဖန်တီးထားသော မိုဘိုင်းအလင်းမျှော်စင်။၎င်း၏ 6X4000W LED အလင်းတန်းများကြောင့် KLT-1000LED သည် အလွန်မြင့်မားသောအလင်းရောင်ပေးနိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့် LED မီးလုံးများ၏ အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကို ပေးဆောင်သည်။အဆိုပါ အကျိုးကျေးဇူးများတွင် မှန်နှင့် မီးသီးများ မရှိခြင်းကြောင့် ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ကြီးမားသောလောင်စာဆီ...
Kubota အင်ဂျင်နှင့် 8kW မီးစက်ပါရှိသော 4X 1000 W metal halide မီးများ။ကိရိယာများကိုလည်ပတ်ရန် အပိုပါဝါများစွာပါရှိသော 20kW အထိ ဂျင်နရေတာအတွက် ရွေးချယ်မှု။လှည့်ပတ်နေသော၊ ပီပြင်သော ဟိုက်ဒရောလစ် ရွက်တိုင်သည် အပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိရန်အတွက် ရှေ့၊ နောက်နှင့် ဘေးဘက်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။light bar သည် 1800-စောင်းလျားပြီး မီးတစ်ခုစီသည် siaကိုအသုံးပြု၍ တိကျသော ဦးတည်ရာသို့ ညွှန်ပြနိုင်သည်။
အမှာစာများ ဆက်လက်လာမည်၊ လစဉ် အထွက်နှုန်းသည် နောက်တစ်ခု ...
2020 တွင် လည်ပတ်မှု 200% တိုးမြင့်အောင်မြင်ပြီးနောက်၊ 2021 တွင် လုပ်ငန်းနှင့်ရှေ့ဆက်မှုသည် မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ချောမွေ့စွာ အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။ယခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်တွင် ယမန်နှစ်က ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် 2021 ခုနှစ်၏နောက်ဆုံးလသို့ဝင်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ကုန်ပစ္စည်းအမှာစာများသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ...
Southern Power Grid ကိုအနိုင်ရခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပါ...
အောက်တိုဘာလတွင်၊ Yunnan Project Center ၏ ရုံးချုပ်အရောင်းဌာနသည် Southern Power Grid တွင် လုပ်ငန်းအတွက် လေလံအောင်မြင်ခဲ့၍ Fuzhou Bright သည် ထုတ်လုပ်မှုကို သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း ပြီးပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ စီစဉ်ပေးကာ ဂရုတစိုက် စီစဉ်မှုများနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များ...
6-17 ပြောင်းလဲနေသော ငလျင်အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး
China Earthquake Network အရ ဇွန်လ 17 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် ဇွန်လ 17 ရက် 22 နာရီ 55 မိနစ်တွင် ပြင်းအား 6.0 အဆင့်ရှိ ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပြီး အနက် 16 ကီလိုမီတာ (မြောက်လတ္တီတွဒ် 28.34 ဒီဂရီ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် 104.9 ဒီဂရီ) အနက် 16 ကီလိုမီတာ .ဇွန်လ 17 ရက်နေ့ 2019 ခုနှစ် ဇွန်လ 17 ရက်နေ့ ည 22 နာရီ 55 မိနစ်အချိန် ပြင်းအား 6.0 အဆင့်ရှိ ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါသည်။
Light Tower အစိတ်အပိုင်းများ...